Soomaali khaniisiin isaga dhiibtay Sweden oo sharciga loo diiday | Somaliska
Nin Soomaali ah oo magaciisa qariyay ayaa Iswiidhan yimid 2012:kii. Wuxuu yahay khaaniis Soomaaliya ka soo qaxay si u nabad ugu noolaado Sweden, balse ayuu diidmo ka helay Laanta socdaalka. Wuxuu hadda sugaya in waddanka laga saaro oo Somalia lagu celiyo.
“Weey igu adkayd in aan soo hor fadhiisto turjubaan soomaali ah oo aan afka ka idhaahdo waxaan ahay nin soomaaliyeed oo khaanis a” ayuu sheegay.
Dhanka kale ayuu dhaleecaynaya sida ay laanta socdaalku u xallisay kiiskiisa. Tusaalahan ayaa marku maxkamada sare ee socdaalka soo fadhistay la weeydiyaay suaalo sharci darro ah, sidee ayey khaniisiintu u galmoodaan, walidkaagu mey ogyihiin in aad tahay khaniis, khaniisintu soomaaliya iyaga oo gacanta is hayya wadadda may mari karaan?
In sharci doonka la weeydiiyo suaalo qooto dheer oo sharafta shakhsiga dilaya ayaa manmuuc ah. Sidaas ayey ku qoraantay sharciga u yaala heeyada socdaalka.
Sofia Sjöö ayaa ku shuqul leh arrimaha la xidhiidha sharci doonka wadamadooda uga soo qaxay habka ay u galmoodaan, waxaa af iswiidhishka lugu yidhaahdo HBTQ personer.
Idaacada Sweden oo Sofia ka wareeysatay istraatajiyada ay heeyada socdaalku u hayaan dadkan ayey sheegtay in ay jirto qorshe ku saabsan habka loo qaabilayo dadkan, hasayeeshe in ay waxbarashadii ay ugu talo galeen dadka heeyadan ka hawlgala si ay u kordhiyaan aqoonta la xidhiidha dadka isku jinsiga ah ee nolosha wadaaga iyo dadka jinsiga ay ku dhasheen u bedela ka kale, la habsaameen.
Waxbarashadan oo ay Iswiidhan la soo saartay wadamadda midoowga Yurub ee EU ayaan weli laga bilaabin heeyada socdaalka. Sababta ayaa ah, ayey sheegtay Sofia Sjöö, in ay sannadkii ugu dambeeyay qaxooti faro badan soo gaadhay Iswiidhan.
Stig Åke Pettersson, oo ah gacanyare ka tirsan urur lagu magacaabo RFSL oo u dooda xuquuqda sinnaanta galmada, ayaa dhaleecayn xoog leh u gudbinaya heeyada socdaalka.
“Waxay ku xirantahay dadka baadhitaanka sameeynaya, in qofka sharci la siiyo ama loo dido, sideed sanno ayey heeyadu isku dayaysay in ay aqoonta la xidhiidha dadkan kordhiyaan, weli na isbedel kama arko, ” ayuu sheegay Stig Åke Pettersson.
waxan u maleynayaa in uu sharci uun ku doonayo ee uusan qaniis aheyn lkin hadii xitaa ey sharci la aan ku qabato ma aha wax la sheegto qaniis nimo yaa huu dheh
Shekadaan dadka iran kasoo jeeda qaarkood ayaa lagu yaqaaney qaniis iyo gaal ineey sharci kuhelaan, somalidiina miyee kudaydeen.
July 18, 2016 at 02:21
Hal nin Leeba idaacada sheegtay wali lawareestay xaad sumcada umada Somali loo aflagaadee haa ogaal hajiro wax kasto in leeska qoro maahin raqiib iyo catiit qof kasto xisaabinaayo Ee alle halaga baqo
July 19, 2016 at 00:31
ninkan webbsite kan wax ku qora ma yaqano ethics saxafada runt i horan ushegay na yaqan habqoraalka iyo gundhiga maqalka imka hal wiil buu inagu sheegay cinwaanka na waxa ku qoran somali khanisnimo isaga dhibtay swedan malin horen qoxotiga iyo kacsi maxa kala haysata ayuu noga dhiga cinwaan
Kkkkk rageedii…!!!! Sharcigey ku adkeeyeen libaaxa.
Yaahuu dheh hadeyba run tahay xaaraha,
yaahuu amba mababa heesto sharci waxaas laga ficanahay in lasheegto subxanallaah
Qanisti ku dhasha waas adaa qaniis ah ee jooji xumanta aad faa ineysid aad qanis ah ee soo bandhigtada duliyahow